Puntland oo ugu baaqday ganacsatada hubka heysta in ay Hubkooda Sharciyeeyaan. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Puntland oo ugu baaqday ganacsatada hubka heysta in ay Hubkooda Sharciyeeyaan.
Puntland oo ugu baaqday ganacsatada hubka heysta in ay Hubkooda Sharciyeeyaan.
Wasiirka Amniga ee Dowlad goboleedka Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf oo Wariyeyaasha maanta kula hadlay Magaalada Garoowe ee Xarunta maamulkaasi ayaa ka hadlay guud ahaan Xaaladda Amaan ee puntland iyo Howlgallo Ciidamada Amaanka ay ka bilaabeen Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari, laguna baadi goobayo Hubka shar darrada ah.
Axmed Cabdullaahi Yuusuf Wasiirka Amniga Maamulka Puntland ayaa ugu baaqay Ganacsatada iyo Hay’adaha aan Dowliga aheyn ee heysta Hubka Sharci darrada ah in hubkooda ay sharciyeystaan, si loo oggaado tirada hubka ay heystaan, lagana warhaayo.
Wasiirka Amniga Puntland ayaa xusay in arrintaasi ay keeneyso in la adkeeyo Amaanka, islamarkaana Ciidamada ay u fududaaneyso in ay gacanta ay kusoo dhigaan dadka amni darrada abuura ee hubka sharci Maamulka aan u diiwaan gashaneen heysta, isagoo Shacabka ugu baaqay in Ciidamada ay la shaqeeyaan.
Wasiirka Amniga Dowlad goboleedka Puntland Axmed Cabdullaahi Yuusuf, oo sii hadlayey ayaa sheegay in hubka ay sharciyeynayaan uu ugu weyn yahay Qorigaloo yaqoono AK47, ayna oggoleyn hub qorigaasi ka weyn.
Previous articleLabada gole ee Baarlamaanka iyo Xukuumadda oo kulan looga hadlayey dardargalinta Dastuurka ku yeeshay Muqdisho
Next articleGaadiid Ganacsi oo gaaray Magaalada Xudur ka dib markii Ciidamada Xoogga Dalka howlgalo ka sameeyeen Waddooyinka isku xirra Gobolada Bakool iyo Hiiraan